FJKM Ankadifotsy FIFAMPIZARANA: tao amin’ny Vondrom-bavaky ny sampana Sekoly Alahady / SA / Fampianarana / Accueil - FJKM Ankadifotsy
FIFAMPIZARANA: tao amin’ny Vondrom-bavaky ny sampana Sekoly Alahady20/01/2014 06:02
“Ampiasao izay nomen’ny Tompo anao” “Dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin’ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra.” Romana 12: 5 no tenin’ny Soratra Masina nitondrana izany.
“Ampiasao izay nomen’ny Tompo anao”
“Ampiasao izay nomen'ny Tompo anao”, io indray no lohahevitra nentina nifampizarana tao amin’ny Vondrom-bavaky ny sampana Sekoly Alahady (Cellule de Prière SA) eto amin’ny Fitandremana FJKM Ankadifotsy. Nizara roa izany fotoana izany ka ny Sabotsy 16 Novambra 2013 no tapany voalohany ary ny sabotsy 23 Novambra 2013 no namaranana izany tao amin’ny sous-sol-ny FJKM ANKADIFOTSY.
“Dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin’ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra.” Romana 12: 5 no tenin’ny Soratra Masina nitondrana izany.
Noharian’Andriamanitra teto an-tany isika mba hitondra ny anjara-birikintsika hanompo Azy (Jereo ny Efesiana2,10), hitarika an’ireo mbola tsy mahalala ny Ray hahazoany famonjena. Mila manaiky izany iraka izany isika. Mialoha ny anomezany izany asa tsara izany isika dia volavolainy, karakarainy ho tonga solontenany eto an-tany. Andriamanitra no nifidy antsika ary efa fantany isika hatrany am-bohoka.
Midera ny Tompo eto i Davida amin’ny zava-tsoa nomeny azy:” Fa Hianao no nahary ny voako, namolavola ahy tao an-kibon-dreniko Hianao. Hidera Anao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana ahy, mahagaga ny asanao; ary fantatry ny fanahiko marimarina izany.”Salamo 139,13-14.
Samy nomen’ny Tompo fanomezam-pahasoavana sy talenta avy isika olombelona rehetra. Ao ohatra ny havanana amin’ny fahandrahoana sakafo, ao ny mitendry zava-maneno, ao mahay manao sary, manao poezia, ao ny manamboatra trano ary ao koa ny manampy ny hafa (mahay mihaino, manana faharetana, mahafoy fotoana na vola na toro-hevitra mahasoa) sy sns…
Tsy tian’Andriamanitra isika hitsiriritra ny talentan’ny hafa fa tiany isika hampiasa ny antsika hanompoantsika Azy. Mampandroso antsika ny fahasamihafana. Izany hoe, ao ireo nataon’Andriamanitra mpampianatra, pasitera, mpitsabo, mpamboly, mpanjaitra. Tsy mitovy daholo ny talentantsika fa mifameno. Vatana iray isika, tena iray ihany isika rehetra ary Kristy Tompo no lohantsika. Samy manana ny anjara asantsika isika, izay samy manana ny mampiavaka azy. Tsy misy ambony na ambany (hierarchies) fa miara-miasa hahasoa ny tena araka ny asa nomena azy avy.
Noho izany, mila fantarintsika io talenta nomeny antsika io.
Fantaro ny tenanao,
inona no manavanana anao hatramin’ny fahakely anao?
Tsy voatery noratovinao tany am-pianarana izany fa tsapanao hoe tianao, itanao eny amin’ny fiainanao eny. Manarak’izay rehefa fantatrao ilay talenta dia ekeo ary tiavo fa nomen’ny Tompo anao izany. Hampitomboy amin’izay ary io talenta tianao io ary mangataha amin’ny Tompo (vavaka) amin’ny fikolokoloanao azy mba hitombo sy hampiasanao ho amin’ny voninahiny. Ny fanoharana amin’ny talenta tamin’ireo virijiny folo ao amin’ny Matio 25: 14-30 no entintsika handraisana fampianarana avy amin’ny Soratra Masina.
Ekeo sy ankasitrao ny maha-ianao anao sy ny talenta ary ny fanomezam-pahasoavana nomen’Andriamanitra anao. Ny olana tsy hahatanteraka io tena iray io dia ny tsy fahafaham-po amin’ny maha-ianao anao (faniriana te-hitovy amin’ny olon-kafa) ary tsy miezaka mikaroka io talenta ao aminao io fa kamo dia tsy miasa saina.
Ny vokatr’ireo olana ireo anefa dia miseho amin’ny endrika roa: ny voalohany dia mety hampitaha ny fanompoantsika amin’ny fanompohan’ny hafa izany hoe lasa mpiebohebo, lasa feno fahakiviana tanteraka, lasa mitsiriritra ny hafa izay lasa fahotana.
“Fa izahay tsy sahy hanao ny tenanay ho isan’ny sasany izay midera tena, na hampitaha ny tenanay aminy, fa tsy hendry ireny… 2Korintianina 10,12”.
Faharoa manarak’izay, mety tsy hanao ny fanompoana ho an’Andriamanitra intsony isika fa lasa ho an’ny olona. Hoy II Tim.4: 3 hoe “Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan’ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany.”
Ny vahaolana aroso dia samia manao ny asa nampanaovin’Andriamanitra hahasoa ny tena iray dia ny fiangonana. Ohatra raha mpivarotra amin’ny “épicerie” na mpitondra taxi ianao, ataovy ho voninahitr’Andriamanitra io asa nomen’ny Tompo anao io, fitaovana tsara sy mahasoa ampiasain’ny Tompo ianao hitory amin’ireo olona mandalo eo aminao isan’andro.
Ho fehin’ny famelabelaran-kevitra dia ireto hafatra ireto no notsoahina tamin’izany:
1- Ilaina ny fitomboana ara-panahinao sy ny fitomboan’ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomena anao. Baiko nomen’ny Tompo io fampitomboana io araky ny Matio 25,14-30 sy Hebreo 5-14.
2- Ataovy ho an’I Jesoa Tompo izany fitomboana izany fa tsy ho an’ny hafa satria tsy mahay manao na inona na inona isika raha misaraka Aminy (Jaona 15,5-7).
3- Mety ho very tanteraka ny fanomezam-pahasoavana raha tsy mitombo ary mety hahavery ny fanahinao mihitsy aza satria rehefa tsy miasa anaty fanompoana isika dia miha-osa sy miha-malemy ary lasa marary ary ny hiafarany dia fahafatesana ( maty ara-panahy).
4- Ny Romana 15,5-7, 14,1sy Romana 12,14-21 ary Jaona 14,27 no hafatra hamaranana ny famelabelaran-kevitra.
Ny voninahitr’Andriamanitra anie ho antsika mpamaky rehetra dia mirary taona vaovao sambatra feno fahasoavan’ilay Raintsika.